Ulapha: Ikhaya / Isipho, Amathikithi Okuphromotha / Ibhokisi Lezimonyo / Ibhokisi Lezinhlaka Eziyindilinga / Amathayi weZikwele Eziyisisekelo Amancane Wokupakisha Izimonyo
Njengomkhiqizi webhokisi lebhokisi le-tin, i-YiCheng Industrial inikezela ngamathokheni we-Ffer Custom Micro Metal Cosmetic Tins ukuze agcine izinto eziningi ezahlukahlukene, njengama-balms wezindebe, amayini, amakhandlela amancane, okhiye, ukufakelwa kwezimonyo.
1. Ukufakwa kwamabhokisi wensimbi ebangeni eliphakeme kungathuthukisa ibanga lokuphaka lokudla, izipho newayini. Umklamo omuhle we-2.custom, ukuphrinta okuhlukahlukene, njengombala we-CMYK, imibala ye-PMS, imibala yensimbi, uwoyela wokuqhuma njll.
3. Ibhokisi le-tin liqinile futhi lisebenza kahle ngokubopha uphawu, okungavikela umkhiqizo kahle nokwenza umkhiqizo ube nzima ukuwohloka futhi ungahambi kabi.
4. Izinto ezifakwa ebhokisini le-tin zi-tinplate, ngakho-ke zingaphinde zisetshenziswe kabusha futhi zisetshenziswe kaningi, okuwusizo ekuvikelweni kwemvelo
Zonke 5 /Amathoni e-Aluminium 0 /Amabhisikidi namathikithi amakhukhi 0 /Amabhakede 0 /Amathini Amakhekhe 0 /Amathangi ekhandlela 0 /Amathikithi e-Candy & Mint 0 /Amabhokisi we-Chocolate Tin 0 /Amathanga kagwayi 0 /Amathofi wekhofi 0 /Ibhokisi Lezimonyo 1 /Amapakeji Okuphakisha Ukudla 0 /Isipho, Amathikithi Okuphromotha 2 /Imikhiqizo Eshisayo 0 /Amabhokisi we-Tin angajwayelekile 0 /Amathiphu we-Lunch 0 /Ipensela, Amathenisi wezinto zokubhala 0 /Ibhokisi le-pet Food Tin 0 /Amabhakede e-PVC (PET) 0 /Ibhokisi Lezinhlaka Eziyindilinga 4 /Amabhokisi we-Round Tin 0 /Amabhokisi Esikwele 0 /Amathiphu Tea 0 /Ibhokisi le-Tin Box 0 /Amathoyizi, Amathoyizi nemali 0 /Ithreyi, Ibhakede, Coaster, Isiginali ye-Tin 0
Ukupakishwa Kwebhokisi Lensimbi Elincane Lensimbi Yesitoreji Sokugcoba Amathini Amancane Wekhandlela Lensimbi Esincane Yesitoreji Soshukela